Tetikasa fakana sary azy: Araho ny sakaizany manerantany | Famoronana an-tserasera
Indraindray ny tetikasa iray mahavita mamela ahy tsy hiteny, tsy mieritreritra aho fa olona be fitakiana aho, saingy marina fa androany dia manana fotoana hijerena ireo karazana tolo-kevitra rehetra noho ny tambajotram-pifandraisana. Nahita ny zava-drehetra aho, tetika mazika, fotoana fohy, sary tsy azo antoka, fampielezan-kevitra momba ny dokambarotra izay tsy voatanisa ... Nefa tsy isalasalana fa ity tetikasa ity dia heveriko fa lasa lavitra kokoa. Ilay maherifontsika, Murad Osmann, mpaka sary Rosiana nanjary nalaza eran'izao tontolo izao noho ny sary manaitra azy ary koa noho ny fitiavany.
Ny mpanakanto anay dia nanolotra sosokevitra araho ny sipany erak'izao tontolo izao ary ara-bakiteny koa. Tetikasa sary iray izay maneho taratra mampino an'izao tontolo izao tarihin'nny tànany hatrany. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nanjary fitsiriritan'ny olona an-tapitrisany izy: mandeha tsy tapaka amin'ny toerana mahavariana izy ary mizara an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fitiavany sary sy ny orinasa mpiara-miasa aminy, izay ahitany azy dia mahatsapa fitiavana tsy misy fetrany. Ankoatr'izany dia mampiseho fahakingana tsy azo lavina i Murad. Vao avy nasehony tamintsika fa mbola misy tetikasa izay tena mahaliana antsika ary mampiseho amintsika fa ny fitiavana, ny kanto, ny sary ary ny fizahantany dia tsy foronina daholo.
Avelako ianao ny piraofilinao instagram raha te hanaraka ny diany ianao sy ny santionany amin'ny sariny, na dia betsaka aza ny mombamomba azy. Mahagaga!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tetikasa fakana sary azy: Araho ny sipany erak'izao tontolo izao
Tsara ny hevitra, tsara ny sary, fa ny sasany toa diso ihany (raha ny fahitako azy dia nitranga tamin'ny Photoshop)
Nanaitra ahy ny marina ..